ကယ်တင်ခြင်း – Shwe Canaan
March 29, 2016 Shwe Canaan 0
လူသစ်နှင့် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော် NEW LIFE AND THE WILL OF GOD ခရစ်တော်၌လူသစ် အခန်း (၁၆) လူ့ဇာတိကိုခံပြီး လောကမှာ နေထိုင်ခဲ့စဉ်အချိန် ခရစ်တော်က “ငါသည် ကိုယ့်အလိုသို့ လိုက်ခြင်းငှာ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည် မဟုတ်၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသော သူ၏အလိုကို လိုက်ခြင်းငှာ […]
March 28, 2016 Shwe Canaan 0
ခရစ်တော်၌လူသစ် အခန်း (၁၅) ဘုရားသခင်ဟာကယ်တင်ပိုင်တဲ့ဘုရား၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘုရား၊ဖြောင့် မတ်တိကျတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အ ကြောင်းကိုသက်သေပြဖို့အတွက်ကျွန် တော်တို့(ပြောင်းလဲပြီးသူ)တွေကို လော ကမှာ ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့် ပေးထားတာ ဖြစ်တယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကို တန်ခိုးနဲ့သက်သေခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တမန်၊၁း၈မှာ-“သင်တို့သည် မြေကြီးစွန်း တိုင်အောင် ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်”လို့ ကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ စကားဟာ ကျွန်တော်တို့အားဖြင့် ဒီခေတ်၊ ဒီအချိန်အခါမှာ […]
March 26, 2016 Shwe Canaan 0
ခရစ်တော်၌လူသစ် အခန်း (၁၄) ပြောင်းလဲပြီးသူ အချင်းချင်းမိတ်သဟာ ယ ဖွဲ့ဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမဆို ခင်မင်ရင်းနှီးတတ်ဖို့၊ ဖော်ဖော်ရွေရွေ နေတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြောင်း လဲပြီးသူအချင်းချင်းအနေနဲ့ အတွင်းကျကျ ပေါင်းသင်းမိတ်သဟာယ ဖွဲ့ခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရတွေကတော့ –(Matt. 18:19-20) (က) မေတ္တာ၌ လက်တွေ့ကျင်လည်ခြင်း(1Cor. 13:1-8) ဘုရားသခင်ဟာ […]
March 23, 2016 Shwe Canaan 0
လူသစ်နှင့် ဆုတောင်းခြင်း NEW LIFE AND PRAYER ခရစ်တော်၌လူသစ် အခန်း (၁၃) ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ စကားပြောဆက်သွယ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသစ်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲလာခြင်းဟာ ဘုရားသားဖြစ်လာ ခြင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် အဘဘုရားသခင်နဲ့ စကားပြောဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ အခွင့်ထူးကို ခံစားလာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂလာ၊၄း၆ မှာ […]
လူသစ်နှင့် သမ္မာကျမ်းစာ New Life & The Woed Of God
March 22, 2016 Shwe Canaan 0
ခရစ်တော်၌လူသစ် အခန်း (၁၂) လူဟောင်းကနေ လူသစ်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲလာဖို့အတွက် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားနာယုံကြည်ခြင်းဟာ အဓိကကျသလို လူသစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာလဲ နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာသာ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ရပ်တည်ပြီး ဆက်လက်အသက်ရှင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ သမ္မာ ကျမ်းစာကို ခုံမင်နှစ်သက်လာခြင်းဟာ အသက်တာပြောင်းလဲလာခြားရဲ့ လက္ခဏာသက်သေ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ခံယူခြင်း […]
လူသစ်နှင့် ဝိညာဉ်တော် NEW LIFE AND THE HOLY SPIRIT
March 19, 2016 Shwe Canaan 0
ခရစ်တော်၌လူသစ် အခန်း (၁၁) စစ်မှန်တဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းဟာ လူ့အသိတရားအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိုးစားပြုပြင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ ပြုပြင်ခြင်း (အသစ်ဖြစ်စေခြင်း)သာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် အသက်တာပြောင်းလဲဖို့အတွက် နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာတရားကို တိတိကျကျ ကြားနာရဖို့ လိုပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာဟာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းခြင်းအားဖြင့် ရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် […]
ပြောင်းလဲသူ၏ ဖြစ်စဉ် ABOUT THE NEW LIFE
March 18, 2016 Shwe Canaan 0
ခရစ်တော်၌လူသစ် အခန်း (၁၀)ပြောင်းလဲသူဟာ ခရစ်တော်နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်အောင် ဘုရားတန်ခိုးတော်က လုပ်ဆောင်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတန်ခိုး တော်နဲ့လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း အကျိုးရလဒ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ဝန်ခံပြီး ခံစားရရှိကြောင် ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲ၊မပျောက်ပျက်နိုင်မယ့် ထာဝစဉ် တည်မြဲတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ် (ယော၊၁၄း၂၀)။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်(ဝန်ခံ)သူဟာ၁။ ဘုရားထည့်ထားပေးခြင်းကြောင့် […]
March 16, 2016 Shwe Canaan 0
အခန်း (၉)လူဟောင်းအကြောင်းနဲ့ လူသစ်အကြောင်း အခြေခံကျတဲ့ အချက်တစ်ချို့ကို လေ့လာပြီးတဲ့နောက်၊လူဟောင်းဘဝကနေ လူသစ်ဘဝကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကို ဆက်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ လူဟောင်းနဲ့လူသစ်ဟာ နည်းနည်းပါးပါးမဟုတ်ဘဲ လုံးဝကို ဆန့်ကျင်ကွာခြားလှပါတယ်။နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိ ပကတိဖြစ်၏။ဝိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ငါတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင် သည်ကို၎င်း၊လောကီသားအပေါင်းတို့သည်မာရ် နတ်လက်၌ရှိကြသည်ကို၎င်း၊ ငါတို့ သိကြ၏။ လူဟောင်း လူသစ်ထိုကာလအခါ […]
March 15, 2016 Shwe Canaan 0
ခရစ်တော်၌လူသစ် အခန်း (၈)လူဟောင်းအကြောင်း သဘောပေါက်ပြီးရင် လူသစ်အကြောင်းကိုလည်း သေချာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါလိမ့်မည်။ လူသစ်ဆိုတာ…(က) ဘုရားသခင် ဖွားစေသောသူလူဟောင်းဟာ လူသားမိဘများက မွေးဖွားပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး လူသစ်ကတော့ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော် တိုင်က ဖွားစေတော်မူရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသား(BORN OF GOD) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူဟောင်းနဲ့ လူသစ်ဟာ စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံက ကွာခြားနေတယ်ဆိုတာ […]
ခရစ်တော်၌လူသစ် အခန်း (၇)ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ လူဟောင်းဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းအခြေအမြစ်ကျကျ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခြေခံကျတဲ့ အခက်တွေကို ဖော်ပြပါမယ်။(က) မိခင်က မွေးသောသူ –လူဟောင်းဘဝဟာ မိခင်ဝမ်းမှာ သန္ဓေတည်စပြုချိန်က စလာပါတယ်။ ပိုပြီး တိတိကျကျ ပြောရရင် တော့ အာဒ့ရဲ့ ကျဆင်းခြင်းကနေ စခဲ့တာပါ။ ဘုရားသခင်က အာဒံကို မြေမှုန့်ကနေ […]
လူသား ကျဆင်းခြင်း (THE FALL OF MAN)
March 11, 2016 Shwe Canaan 0
ခရစ်တော်၌လူသစ် အခန်း (၆)လူကို ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိမိအလိုတော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက် ရှင်ပြီး မိမိနှင့်အမြဲတမ်း မိတ်သဟာယဖွဲ့နေရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပထမဦးဆုံး လူသားများဖြစ်ကြသည့် အာဒံနှင့် ဧဝတို့သည်ဘုရားသခင်၏ ရန်သူစာတန်၏ သွေးဆောင်ရာနောက်သို့ လိုက်ပါကြပြီး ဘုရားသခင်၏ စကားကို နားမထောင်ဘဲ ငြင်းဆန်ပုန်ကန်ခဲ့ကြပါသည် (က၊၃း၁-၇)။ထိုသို့ဘုရားစကားတော်ကို ငြိုဆန်ပြီး စာတန်၏စကားကို နားထောင်မိချိန်မှစ၍ […]
စာတန်မာရ်နတ်သည် အဘယ်သူနည်း WHO IS SATAN?
March 3, 2016 Shwe Canaan 0
စာတန်မာရ်နတ်သည် ကောင်းကင်မှ လျှပ်စစ်ကဲ့သို့ ကျဆင်းလာသူ ဖြစ်ကြောင်း ယေရှုကိုယ်တိုင် ဖော် ပြထာါးသည်ကို တွေ့ရပါသည်(လု၊၁၀း၁၉)။စာတန်မာရ်နတ်သည် ကမ္ဘာဦးအစ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ ဧဒင်ဥယျာဉ်၌ နေစဉ်ပင်လျှင် ရှိခဲ့ပါပြီ။ ပထမလူဖြစ်သူ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ထံ မြွေအသွငိဖြင့် လာပြီး အပြစ်သွေးဆောင်ခဲ့ပေသည် (က၊၃း၁-၅)။ “ဤ လောကတစ်နိုင်ငံလုံးကို လှည့်ဖြား၍ မာရ်နတ်စာတန် အမည်ရှိသော ရှေးမြွေဟောင်းတည်းဟူသော […]